Tilmaamaha dumarka kacsiga badan Lagu Garto from Gaaloos.com by noreply@blogger.com (galmada Net) Sun Feb 19 2017 04:00:00 (13 hours) # 3. Dadka aad bay ugu kala duwan yihiin kacsiga ama qooqa waxa lagu magacaabo, rag iyo dumarba, waxaad ogaataa dad inay jiraan galmada aanba ka dhergin. haddaba sidee lagu garan karaa haweenka aadka u raba galmada qaab gaar ah ma leeyihiin? raga qibrada u leh haweenka oo ka qoray galmada buugag waxay sheegaan sifooyin gaar waxaa ka mid ah. naag leh faruuro waaweyn inay qooq badan tahay gabdha leh kub weyn naagta jirka timaha ku leh gabadha ilkaheeda ay kala durug san yihiin siiba fanaxda gabadha naaso adag leh gabdha aan lahayn bado weyn astamaahan ayay ku sheegeen naagaha dareenka badan - Hablaha Media Network
Tilmaamaha dumarka kacsiga badan Lagu Garto from Gaaloos.com by noreply@blogger.com (galmada Net) Sun Feb 19 2017 04:00:00 (13 hours) # 3. Dadka aad bay ugu kala duwan yihiin kacsiga ama qooqa waxa lagu magacaabo, rag iyo dumarba, waxaad ogaataa dad inay jiraan galmada aanba ka dhergin. haddaba sidee lagu garan karaa haweenka aadka u raba galmada qaab gaar ah ma leeyihiin? raga qibrada u leh haweenka oo ka qoray galmada buugag waxay sheegaan sifooyin gaar waxaa ka mid ah. naag leh faruuro waaweyn inay qooq badan tahay gabdha leh kub weyn naagta jirka timaha ku leh gabadha ilkaheeda ay kala durug san yihiin siiba fanaxda gabadha naaso adag leh gabdha aan lahayn bado weyn astamaahan ayay ku sheegeen naagaha dareenka badan
HMN:- Dadka aad bay ugu kala duwan yihiin kacsiga ama qooqa waxa lagu magacaabo, rag iyo dumarba, waxaad ogaataa dad inay jiraan galmada aanba ka dhergin. haddaba sidee lagu garan karaa haweenka aadka u raba galmada qaab gaar ah ma leeyihiin?
raga qibrada u leh haweenka oo ka qoray galmada buugag waxay sheegaan sifooyin gaar waxaa ka mid ah.
naag leh faruuro waaweyn inay qooq badan tahay gabdha leh kub weyn
naagta jirka timaha ku leh gabadha ilkaheeda ay kala durug san yihiin siiba fanaxda gabadha naaso adag leh
gabdha aan lahayn bado weyn astamaahan ayay ku sheegeen naagaha dareenka badan